knowledge Archives - Myanmar Daily
ခြေတွေလက်တွေ ထုံကျင်နေခဲ့ရင် မိမိဘာသာအလွယ်တကူ ကုသနိုင်တဲ့နည်း
2019-07-20 Ko Toe 0
“ခြေလက်ထုံကျင်နေပါက” ခြေလက်ထုံကျင်နေခဲ့ရင်မိမိဘာသာအလွယ်တကူကုသနိုင်တဲ့နည်းကိုပေးပါ့မယ်။ အဝတ်လျှော်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့”ဘရပ်(ခ်ျ)” အကြမ်းတစ်ခုကိုဝယ်ထားပါ။ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းထုံကျင်နေတဲ့နေရာအပေါ်ဘရပ်(ခ်ျ)ကို သင့်တော်တဲ့အားလေးနဲ့အရည်ပြားမထိခိုက်အောင် အထက်ကနေအောက်ကိုအသာအယာ ဖိဆွဲပေးပါ။ အကြိမ်ရေကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရင်ခြေလက်ထုံကျင်တာ သက်သာလာပါမယ်။ခြေလက်ထုံကျင်သူတွေ ဒီနည်းကိုစမ်းသပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ စူးတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်သူတွေအနေနဲ့အပေါ်ကနေ အဝတ်ပါးလေးခံထားပေးပါဗျာ။ တစ်ခါသုံးပြီးတိုင်း ဘရပ်(ခ်ျ)ကို ဆေးကြောသန့်စင်တာအကောင်းဆုံးပါ။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” shwe la thar win Unicode Version ဖြင့်ဖတ်ရန် […]
2019-07-16 Daily Maung 0
(ပြည့်တန်ဆာအိမ်၌ ဝါဆိုခြင်း) – ဇင်ပုံပြင် ဝါဆိုခြင်း ဓလေ့ စတင်ဖြစ်တည်လာခဲ့စဉ်က ရဟန်းတွေဟာ ဒီကနေ့ခေတ်လို တစ်စုတစ်ဝေးထဲ ဝါဆိုနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သေးဘူး။ အလွန်များပြားတဲ့ ရဟန်းတွေ အနေနဲ့ ဝါတွင်း ခရီးသွားလာခြင်း မပြုရ ဆိုတဲ့ ဝိနည်းကိုလည်း ထိန်းရမှာ တစ်ကြောင်း… လူနေအိမ် တစ်အိမ်ထဲမှာ ရဟန်းတွေ […]
တစ်နေ့ ၇ ခေါက်… ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ့်မယ်
2019-07-10 Ko Toe 0
အ ခက် အ ခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင်ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါလား… တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ သိကြားမင်း ဂါထာတော် “ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ ၊သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. […]
“လျှပ်စစ်မီးမလို ဆိုလာမလို အင်ဂျင်မလို သူ့အလိုလိုရေတင်တဲ့နည်း”
2019-07-09 Ko Toe 0
ရေတွင်း ရေကန်ကရေကိုခပ်စရာမလို စုပ်ယူစရာစက်ပစ္စည်းမလိုဘဲ သဘာဝနည်းနဲ့ သုံးရေရယူ စိုက်ခင်းရေဖြန်း ၂၄ နာရီရေတက်နေတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်၊၊ ရိပ်သာထဲရှိ စိမ့်ရေတွင်းထဲကရေကို လုမ္ပနီဥယျာဉ်စိုက်ခင်းအတွက် အလိုအလျောက်ရေတင်နိုင်အောင် စမ်းသပ်ရန်Youtube မှလေ့လာရှာဖွေထားတာပါ၊၊ နည်းပညာကို အားလုံးစမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ကြစေဖို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်၊၊ လေလုံတဲ့သံတိုင်ကီရယ်၊ ပလပ်စတစ်ရေပိုက်နဲ့ ပိုက်ဆက်ပစ္စည်း ရေဘားတွေရယ်၊ ရေစင် ဒီလောက်ပဲလိုပါတယ်၊၊ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဥာဏ်ရှိသလိုတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်၊၊အရေးကြီးတာက […]
သေရမည့် အချိန်ကို ကြိုတင် သိနှင့် သူ
2019-07-05 Ko Toe 0
” တပည့်တော်မ ဒီနေ့ ညနေ ငါးနာရီတိတိမှာ ဆုံးမှာဖြစ်လို့ ဆရာတော်ရဲ့တရားစခန်း အလုပ်မပျက်အောင်… အိမ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါဘုရား ” တဲ့။ ဆရာတော်က အေးအေးသက်သာပဲ ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အာနာပါန သမာဓိကနေ ဝိပဿနာကို တက်ကြတဲ့ ယောဂီတစ်ချို့ဟာ ခုလိုပဲ မိမိသေမယ့်ရက်ကို ကြိုသိနေတတ်ပါတယ်။ အာနာပါန သမာဓိစွမ်းအားကြောင့် သိရတာပါ။ […]
“ရောဂါပေါင်း (၁၀၁)မျိုးကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ရဲယိုသီးရဲ့ အံ့မခန်းအစွမ်းနဲ့ အသုံးပြုပုံများ”
2019-07-01 Ko Toe 0
ရဲယိုသီးကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေ အမြဲစားသုံးလေ့ရှိတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ရဲယိုပင်က ရှားပါးတဲ့ အပင်မျိုးမဟုတ်ပဲနေရာဒေသတိုင်းမှာ ပေါက်ရောက်နိုင်လို့ အပင်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အိမ်တိုင်းစိုက်ပျိုးထားသင့်တဲ့ နတ်ဆေးပင်ပမာ အစွမ်းထက်တဲ့ အပင်တစ်ပင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲယိုသီးက ဒီတိုင်းစားရင်တောင် အစွမ်းထက်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အပြင် ရောဂါပေါင်း (၁၀၁) မျိုးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ရဲယိုသီးကို […]
လာဘ်ပိတ်နေသူများအတွက် လာဘ်ပွင့်ချမ်းသာ ရှင်သီဝလိ ဂါထာ
2019-06-30 Ko Toe 0
ကျွန်ုပ် နှင့် ဆရာတော် အရှင်စန္ဒာသူရိယတို့့ လက်တွေ့အသုံးပြုထားသော ရှင်သီဝလိ ကိုယ်တော်ကြီးအား ပူဇော်ကန်တော့၍ လာဘ်လာဘ ရရှိရန် ဆုတောင်းသော လာဘ်ဖွင့် အစီအရင် တစ်ခု ပါ။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ဖယောင်းတိုင် တစ်တိူုင်ကို သနချေ သိဒ္ဓိတင် ဂုဏ်တော် ရွတ်ဖတ်ပြီးပါက ရှင်သီဝလိ ဂါထာကို ဖယောင်းတိူင်မှာ […]
အင်္ကျီမှာစွဲနေတဲ့ ဖားဥတွေကို ဘယ်လို ချွတ်မလဲ
2019-06-29 Ko Toe 0
မိုး ရာ သီမှာ အကျီ င်္ဖားဥစွဲတဲ့ ပြဿနာကြောင့် အိမ်ရှင်မတွေ စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဖားဥကို ချွတ်ချင်ဇောနဲ့ လျှော်ပေမယ့် မပြောင် ၊ ချွတ်ဆေးတွေသုံးတော့လဲ အရောင်တွေကွက် ၊ အကျီတွေပါးနဲ့ အင်မတန်မှ စိတ်ရှုပ်ရပါတယ်။ အကျီ င်္လဲမမွဲ ၊ လူလဲမထိတဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ […]
မင်္ဂလာပွဲ ကြေကြီးလေလေ ကွာရှင်းနိုင်ခြေပိုများလေလေ ဖြစ်ကြောင်းသိရ
မင်္ဂလာပွဲကြေးကြီးလေလေ ကွာရှင်းနိုင်ခြေများလေလေ ဖြစ်ကြောင်း သိရ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ငွေကုန်ကြေးကျအများကြီးခံပြီး မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်တဲ့စုံတွဲတွေဟာ ခြိုးခြိုးခြံခြံနဲ့ မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်တဲ့ စုံတွဲတွေထက် ကွာရှင်းနိုင်ခြေပိုများတယ်လို့ harpersbazaar မဂ္ဂဇင်းက ကောက်ခံခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ ဒီလေ့လာချက်ကို ဘောဂဗေဒပရော်ဖက်ဆာတွေက အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ လူပေါင်း(၃) ထောင်ကျော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေကို လေ့လာအပြီးမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာချက်အရတော့ […]
သပြေ ၃ ခက် စီးပွားတက် အလုပ်ကိစ္စ အဆင်ပြေပြီး စီးပွားတက်စေဖို့ သပြေ (၃) ခက် အစီအရင်
သပြေဟု အမည်ရှိသည့် အညွန့်သည် လူသားတို့အား အထူးအကျိုးပေးသည်။ အရာရာ အောင်စေတက်သော သလောရှိခြင်းကြောင့် အောင်သပြေ ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ကပ္ပလင်္ကာရကျမ်း အရ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ပထမဆုံး ပေါက်သောအပင်မှာ သပြေဟုဆိုထားပါသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ လောကီအလိုအရ သပြေသည် သောမဓါတ် သောကြာနှင့် ကြာသပတေးနံ ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သောကြာ […]
မိုင်တိုင် ၁၆၅/၃အနီး ထွန်းဧရာ Express တိမ်းမှောက် သတင်း နောက်ဆက်တွဲ ၁ဦးသေ၊ ၄၄ဦး ဒဏ်ရာရ
Breaking News >>မော်လမြိုင်-ရန်ကုန် လမ်း ပေါင်မြို့နယ် ကျုံကကျေးရွာ ကျုံက ဘုန်းကြီးကျောင်းနား Express ကားတွေကို လေးခွနဲ့ပစ်နေ …